भारत निर्वाचन: नरेन्द्र मोदी र डोनल्ड ट्रम्पको 'व्यक्तिप्रधान राजनीति' मा समानता - BBC News नेपाली
भारत निर्वाचन: नरेन्द्र मोदी र डोनल्ड ट्रम्पको 'व्यक्तिप्रधान राजनीति' मा समानता
तस्वीर कपीराइट BBC/Gettty Images
Image caption मोदी जस्तै ट्रम्पको चुनावी नारा "मेकिङ् अमेरिका ग्रेट अगेन" अर्थात् अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने भन्ने अवधारणामा तयार पारिएको थियो।
सो निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धेरै दौडधुप गरे। दोस्रो कार्यकालको अपेक्षामा रहेका उनी १४० भन्दा बढी चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भए। सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको निर्वाचनमा डोनल्ड ट्रम्पले पनि त्यति नै सङ्ख्यामा चुनावी सभामा सहभागिता जनाएका थिए। बीबीसीकी रजनी वैद्यनाथनले यी दुई नेताको व्यक्तिप्रधान राजनीतिक प्रवृत्तिमा देखिएका समानताबारे विश्लेषण गरेकी छन्।
भारतीय आम निर्वाचन २०१९ को प्रत्यक्ष परिणाम
भारतमा के नरेन्द्र मोदी फेरि आउलान्?
उनीहरूमध्ये केही नाच्दै र गाउँदै छन् भने केही "मोदी मोदी" भन्दै नारा लगाइरहेका छन्।
"तपाईँलाई भाजपा छाता चाहिन्छ?" भाजपाको प्रतिनिधित्व गर्ने हरियो र सुन्तला रङ्ग भएको छाता खोल्दै उनले मलाई सोधे।
मोदीजस्तै ट्रम्पको चुनावी नारा "मेकिङ अमेरिका ग्रेट अगेन" अर्थात् अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने भन्ने अवधारणामा तयार पारिएको थियो।
सत्ताइस वर्षका अरुण वंसलले "नमो अगेन" अर्थात् फेरि पनि नरेन्द्र मोदी लेखिएको पहिरन लगाएका छन्।
"राष्ट्रिय सुरक्षा र पाकिस्तान यस पालिको चुनावका महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्," भाजपाका एक कार्यकर्ताले मलाई भने।
मैदानभित्र प्रवेश गर्नै लाग्दा मोदीकै जस्तो भेष बनाएका कैयौँ मानिसमध्ये एक जनासँग मेरो भेट भयो। उनका अभिभावकले "लिटल मोदी" भनेर बोलाउने अत्रि सात वर्षका छन्। उनले चुनावी सभाहरूमा चार वर्षको उमेरबाटै सहभागिता जनाउन थालेका हुन्।
तस्वीर कपीराइट Getty Images/BBC
"मलाई मोदी राम्रो लाग्छ किनकि उनले राम्रो काम गरिराखेका छन्। उनले गरिबलाई सहयोग गर्ने गरेको सबैले भन्ने गर्छन्," कुनै दिन प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बोकेका अत्रि भन्छन्।
दुवै नेताका र्‍यालीमा सहभागीहरूको शिरमा टोपी देखिन्छ। अमेरिकामा एमएजीए लेखिएको रातो टोपी थियो। यहाँ भने 'नमो अगेन' लेखिएको गेरु रङ्गको टोपी छ।
"उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि यो क्षेत्रमा आयोजित उनका सबै र्‍यालीमा म गएको छु," उत्साहित हुँदै उनी मलाई भन्छन्, "उनी परिश्रम गर्छन्, उनी देशबारे चिन्ता गर्छन्। उनी बलिया नेता भएकाले म उनलाई मन पराउँछु।"
Image caption रणवीर धियमसँग बीबीसी टोली
"प्रधानमन्त्री मोदी र म सामाजिक सञ्जालमा विश्वनेता हौँ।" सन् २०१७ मा दुई जनाको ह्वाइट हाउसमा भेट हुँदा ट्रम्पले भनेका थिए। ट्विटरमा ट्रम्पका छ करोड ४० लाख फलोअर छन् भने मोदीका चार करोड ७३ लाख।
रणवीर धियम सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन्। उनी हिजोआज एउटा र्‍यालीबाट अर्को र्‍यालीमा गइराख्छन्। "यो निर्वाचनमा पाँच सय मानिस मसँग सेल्फी खिच्न आए," उनले मलाई सगर्व भने।
केही मिनेटपछि प्रधानमन्त्रीलाई करतलध्वनिले स्वागत गर्न आग्रह गर्दै उद्घोषकले उनलाई मञ्चमा स्वागत गर्छन्। त्यसका लागि उनी पाकिस्तानमा भारतले गरेको हवाई आक्रमणको सन्दर्भ जोड्दै "तालीको हवाई आक्रमण" भन्ने आशयको शब्दावली प्रयोग गर्छन्।
के मोदीको जित पाकिस्तानका लागि हितकर हुन्छ
समर्थकहरू चिच्याउँदै र मोबाइल फोन बजाउँदै एकै स्वरमा "मोदी, मोदी" को नारा घन्काउँछन्।
आफ्नो भाषण थाल्दा मोदी "भारत माताको जय" भन्छन्।
फेरि मैले २०१६ को अमेरिकी निर्वाचनमा "यूएसए, यूएसए" को नारा लगाएको सम्झिएँ।
"के हामीले आतङ्कारीलाई तिनकै देशमा मार्नु हुँदैन र?", उनी सोध्छन्, "मलाई भन्नुहोस् - पर्दैन त?"
"पर्छ," भिडले उत्तर दिन्छ।
"उनीहरू आफ्ना पूर्वजको नाम भजाउँदै मत माग्छन्। तर तिनका पूर्वजले के गरे भनेर सोद्धा उनीहरू रिसाउँछन्।" मोदीले यसो भन्दा सयौँ समर्थकहरू सहमति जनाउँछन्।
तस्वीर कपीराइट BBC/Getty Images
Image caption सात वर्षीय अत्रि (दायाँ) चार वर्षको उमेरदेखि राजनीतिक सभामा जान थालेका हुन्
सन् १९९१ मा हत्या गरिएका पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई मोदीले "भ्रष्टाचारी नम्बर एक" भनेका थिए।
अठारमहिने बच्चालाई मोदीकै जस्तो लुगा लगाइदिएर यो कार्यक्रममा सहभागी दिल्लीका मिस्त्री सन्तोष भन्छन्, "मलाई उनी धेरै मन पर्छ। उनमा धेरै आकर्षण छ।"
"म खाना छोड्न तयार छु। तर म मेरो देशलाई अपमान गरेको सहन सक्दिनँ। त्यसैले म मोदीलाई मन पराउँछु।"
डोनल्ड ट्रम्प: तौल बढेको भए पनि उनका चिकित्सक भन्छन् , 'उनी स्वस्थ छन्'
15 फेब्रुअरी 2019
भारत निर्वाचन: यसपालि नरेन्द्र मोदीका नयाँ अस्त्र काम लाग्लान्?